အဘယ်ကြောင့် INSTAGRAM ကိုဓါတ်ပုံများကို LOAD မပါဘူး - INSTAGRAM ကို - 2019
ထိုပြဿနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများ: အ Instagram ကိုဓါတ်ပုံများကို load မပါဘူး
TIFF - များစွာသောဂရပ်ဖစ်ကို formats တဦးလည်းအသက်အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောပုံတစ်ပုံကို format နဲ့အမြဲနေ့စဉ်အသုံးပြုအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး - မဟုတ်အနည်းဆုံးကြောင့်ပမာဏ၏, ထိုကဲ့သို့သော extension ကိုရုပ်ပုံများကိုချုံ့ Lossless ဒေတာတွေဟာကတည်းက။ အဆိုပါ TIFF format ရဲ့အဆင်ပြေများအတွက် software ကိုပိုမိုအကျွမ်းတဝင် JPG အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
JPG မှ TIFF converting
အထက်ပါဂရပ်ဖစ် format နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကအရမ်းဘုံနှင့်ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာများ, ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အချို့ပုံရိပ်တွေအဖြစ်အခြားလက်ကိုင်သို့တဦးတည်း converting များ၏တာဝန်နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: JPG အတွက် PNG ပုံရိပ်တွေပြောင်း
Method ကို 1: Paint.NET
လူကြိုက်များအခမဲ့ပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာ Paint.NET လူသိများ plug-in ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်ကို Photoshop နှင့် GIMP ကဲ့သို့ထိုက်တန်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် tool များ၏ဥစ္စာဓနဆင်းရဲ, နှင့် Ghimpu အသုံးပြုသူများအ Peynt.NET မှနေသားတကျမသက်မသာပုံရသည်။
Program ကိုဖွင့်ပါ။ မီနူးကိုသုံးပါ "File"selection ရသော "ပွင့်လင်း".
ထဲမှာ "Explorer ကို" TIFF format နဲ့သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံပါဝင်သောဖိုင်တွဲရန်လိုက်နာပါ။ ကကိုရွေးပြီးကလစ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ဖိုင်ကိုနောက်တဖန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, menu ကိုသွားပါ "File"ပစ္စည်းအပေါ်၎င်း, ဤအချိန်ကလစ် "Save As ကို ... ".
တစ်ဦးက window ကိုပုံကိုကယ်တင်ဖွင့်လှစ်။့dropdown list ထဲမှာအထဲတွင် "အမျိုးအစား၏ဖိုင်များ" ရှေးခယျြသငျ့သညျ "JPEG,".
အဆိုပါ, settings ကိုကယ်တင်ကလစ်အတွက် "အိုကေ".
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေအပေါ် (1 MB အထိထက် သာ. ကြီးမြတ်အသံအတိုးအကျယ်) ချွေတာသိသိသာသာနှေးကွေးဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအဘို့အဆင်သင့်ရှိပါစေ။
Method ကို 2: ACDSee
လူသိများတဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုသူ ACDSee အလယ်ပိုင်း 2000 ပြည့်နှစ်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသုံးစွဲသူများကပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးကမ်းခြင်း, ယနေ့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်ဆက်လက်။
အဆိုပါ ASDS ကိုဖွင့်။ အသုံး "File"-"ပွင့်လင်း ... ".
ဒါကဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ၏အစီအစဉ်ကိုသို့ built ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာပစ်မှတ်ပုံရိပ်နှင့်အတူ directory ကိုသွားပါ, လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ဖိုင်ကို program ကိုစတင်ဆောင်သောအခါ reselect "File" နှင့်အပိုဒ် "Save As ကို ... ".
မီနူးထဲမှာဖိုင် save ဖို့ interface ကို "File အမျိုးအစား" install "JPG-JPEG,"ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save".
အဆိုပါပြောင်းလဲ image ကိုလာမယ့်မူရင်းဖိုင်ကိုရန်, program ကိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ချို့တဲ့အနည်းငယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်အရေးပါနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး - တစ်ကြေးကဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုပျံ့နှံ့။ ဒုတိယ - ခေတ်မီ interface ကို developer များစွမ်းဆောင်ရည်ထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောစဉ်းစားမအာဏာအရှိဆုံးကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်အပေါ်သိသိသာသာ retarding ။
Method ကို 3: FastStone Image ကို Viewer ကို
ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုဘို့နောက်ထပ်လူသိများတဲ့လျှောက်လွှာ, FastStone Image ကို Viewer ကိုလည်း TIFF ကနေ JPG မှပုံရိပ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
FastStoun Imeydzh Viewer ကိုဖွင့်ပါ။ အဓိက window ထဲတွင်လျှောက်လွှာဖို့ scroll "File"selection ရသော "ပွင့်လင်း".
program ကိုပြတင်းပေါက်ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုသို့တည်လိမ့်မည်သည့်အခါ, သငျသညျ, convert ကကို select နှင့် button ကို click နှိပ်ချင်သောပုံရိပ်၏တည်နေရာကိုသွား "ပွင့်လင်း".
အဆိုပါပုံရိပ် program ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်နောက်တဖန် menu ကိုသုံးပြီး "File"ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် "Save As ကို ... ".
interface တစ်ခုအဖြစ်ဖိုင်ကိုကယ်တင်မည် "Explorer ကို"။ ဒါဟာ drop-down menu ကိုလိုကျနာ "File အမျိုးအစား"selection ရသော "JPEG, Format ကို"ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "Save".
သတိထားပါ - အမှတ်နှိပ်ဖို့မ "JPEG2000 Format ကို"တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော file ကိုရ, အလိုချင်သောမဟုတ်မှာကိုတိုက်ရိုက်တည်ရှိသည်!
ပြောင်းလဲခြင်း၏ရလဒ်ချက်ချင်း FastStone Image ကို Viewer ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်၏ဆုံးသိသာအားနည်းချက်တစ်ခုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါသည် - သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ကြောင်း converting, TIFF-ဖိုင်တွေအများကြီးရှိသည်ဆိုပါက။
Method ကို 4: Microsoft ကသုတ်ဆေး
အချို့သံသယတွေနဲ့ဆိုသော်ငြား - built-in Windows ကိုဖြေရှင်းချက်ကိုလည်း JPG အတွက် TIFF ဓာတ်ပုံများ converting ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် menu ပေါ်တွင်တည်ရှိသောထို program (ကိုဖွင့် "Start"-"All Programs"-"စံ") ထို menu button ကို click လုပ်ပါ။
main menu ကိုခုနှစ်, select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ဖွင့်လှစ် "Explorer ကို"။ ဒါဟာသင်, convert ကကို select နှင့်သင့်လျော်သော button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပွင့်လင်း click နှိပ်ချင်သောဖိုင်ကိုအတူ folder ကိုရယူပါ။
နောက်တဖန်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်, main menu ကိုအသုံးပြုပါ။ ကမှာကို item ပေါ်တွင် cursor နေရာ "Save As ကို" နှင့် pop-up menu ကို, အကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "JPG format နဲ့ရုပ်ပုံ".
ဝင်းဒိုးကိုမှတပါးပွင့်လင်း။ တောငျးဆိုခကျြတွင်, ဖိုင်ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းအမည်ပြောင်း "Save".
Done - JPG format နဲ့ပုံယခင်ကမရွေး folder ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အခုကဆိုပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအကြောင်း။ က MS Paint 32-bits သော TIFF, အရောင်အတိမ်အနက်နှင့်အတူသာဖိုင်များကိုနားလည်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ အထဲတွင် 16-bit နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖွင့်မဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျက 16-bit နဲ့ TIFF ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းဖို့လိုအပျပါလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, ဤနည်းလမ်းကိုသင် fit ပါဘူး။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, TIFF ကနေ JPG ဖို့ဘာသာပြောင်း options များ၏ဓာတ်ပုံများအလုံအလောက်နှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်ဒါလွယ်ကူသည်မဟုတ်, သို့သော်, အင်တာနက်ကိုမပါဘဲအလုပ်၏အပြည့်အဝအစီအစဉ်၏ပုံစံသိသိသာသာအားသာချက်အတော်လေးအဆိုပါချို့ယွင်းချက်များအတွက်အစားထိုးချေသည်။ သငျသညျ JPG မှ TIFF ပြောင်းလဲရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှာရှိလျှင်စကားမစပ်, မှတ်ချက်များအတွက်, သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးဖော်ပြရန်ပေးပါ။